Waldaa Aksiyoona Naashinaal Miidiyaa - National Media
Waa hunda madaalanii ilaaluu fi murteessuu danda’uun bilchina namummaa isa ol’aanaa dha. Sadarkaa namummaati. Dandeettii cimaa dhiibbaa garee kamiyyuu irraa walaboomanii sababa qabeessuumaa fi yaada madaalawaarratti hundaa’uudhaan waa hubachuu fi murteessuuti. Ga’umsa dhiibbaan firummaa fi hawaasummaa otoo hindaangeessin murtii sirrii ta’e murteessuu danda’uuti. Ilmoo haadhaallee yoo ta’e; balleessinaan ‘’ati sirrii miti’’, ‘’siitu balleesse’’ jedhanii nama sirrii ta’eef haqa murteessuu danda’uuti. Duuchumaan kan koo waan ta’eef qofa sirrii dha jechuu keessaa yaada madaalawaa qabatanii dandeettii bahuuti.
Utubaa cimaan biyyaa lammii yaada madaalawaa fi sababa qabeessa akkanaa qabuu dha. Lammii yaada madaalawaan tarkaanfatu horachuuf sababa qabeessa ta’anii hojjachuun hojii ijaarsa biyyaa isa olaanaa dha jennee amanna.
Haaluma kanaan gahee keenya bahachuuf dhufnee jirra.
Naashinaal Miidiyaan Waldaa Aksiyoonaa Itoophiyaanota biyya isaaniitiif quuqamoo ta’anii fi sababa qabeessuummaa fi yaada madaalawaarratti amantii cimaa qabaniin kan hundaa’e dha. Itoophiyaan ijoollee ishee hundaaf iddoo jireenyaa mijooftuu fi fooyya’aa akka taatuuf ni hojjanna.
Finxaaleessummaa fi miira hinmalleen socho’uun kamiyyuu sababa qabeessuummaa fi yaada madalawaan akka ijiftaman cimnee nitumsina. Waltajjii yaadaa bilisaa fi madda odeeffannoo wayitawaa fi amansiisaa ta’uun akeeka keenya.
Miidiyaan industirii dha jennee amanna. Akkuma industirii kamiiyyuutti kallattii hojii investimantii fi ogummaa haala waliigalaa diinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa biyya keenyaa keessatti shoora olaa’aanaa gumaachuu danda’u ta’uu isaas nihubanna. Teeknoolojii ammayyaa fi gahumsa ogummaa ol’aanaan sagantaalee fi gabaasota barsiisoo, boharsoo fi odeeffannoo kennan dhiyeessuudhaan fudhatamummaa ol’aanaan eegaree bareedaaf hojjachuun ergama keenya.
Haaluma kanaan buufata Teleevjiinii NBC ITIYOOPHIYAA jedhamu hundeessinee ji’oota sadan darban tamsaasa yaaliirra tureerra. Ji’oota muraasa booda gara tamsaasa idilee guutuutti niceena. Dabalataaniis raadiyoo fi damee miidiyaa biraatiin dhaqqabamummaa keenya bal’isuuf hojjachaa jirra. Sagantaalee Afaan Amaaraa, Afaan Oromoo, Afaan Tigree fi Afaan Sumaaleetiin ala chaanaalota afaanota biroo kan biyya keessaa fi biyya alaatiin tamsaasan hundeessuun karoora keenya.